Casey Brown: မိမိတန်ဖိုးကို သိထားပြီး အဲဒါ့အတွက်ထိုက်တန်စွာ တောင်းဆိုပါ။ - English-Video.net
Casey Brown - Pricing consultant
Casey Brown isapricing geek and professional speaker. She leads an organization that helps companies improve profits through better pricing. She speaks at conferences, trade associations and networking groups around the world. She is onamission to correct the injustice of underpricing.
With degrees in chemical engineering, Spanish and business -- and career experience in engineering, Six Sigma and pricing strategy -- Brown uses her expertise to help clients discover their true pricing power. She is fluent in Spanish and holdsaUS Patent for lightbulb technology she developed.
Brown volunteers more than 600 hours annually around the world, focused on meeting children's basic needs. She volunteers with Drop in the Bucket,anon-profit which drills wells in Africa, with Free to Smile, an organization dedicated to performing cleft lip and palate repair surgeries globally, and with First Descents,agroup that provides life-changing outdoor adventures for cancer survivors.
Casey Brown | Speaker | TED.com
Casey Brown: မိမိတန်ဖိုးကို သိထားပြီး အဲဒါ့အတွက်ထိုက်တန်စွာ တောင်းဆိုပါ။
သင့်အကြီးအကဲက သင့်အား ပေးနေတာဟာ သင့်နဲ့ထိုက်တန်ပုံ မရပါဘူး၊ ဒီအစား သူတို့ ထင်မှတ်တဲ့ တန်ဖိုးကို ပေးနေကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ တွေးခေါ်မှု ဘယ်လိုပုံသွင်းနိုင်မယ် ဆိုတာကို အချိန်ယူလေ့လာပါ။ တန်ဖိုးဖြတ်မှု အကြံပေး Casey Brown ကနေပြီး သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို ပိုကောင်းမွန်စွာ အသိပေးဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ထူးချွန်မှုအတွက် ပေးဆပ်လာအောင် ထောက်ကူ ပေးနိုင်ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ သင်ကြားလေ့လာစရာတွေကို မျှဝေထားပါတယ်။
Casey Brown wants people to be paid well for their excellence. Full bio
No one will ever pay you
ဘယ်သူမှ သင့်အား ထိုက်တန်စွာ
They'll only ever pay you
what they think you're worth.
And you control their thinking,
သူတို့အတွေးကို သင် ဒီလို
အဲဒါက မိုက်ချင် မိုက်မှာပါ။
ဒါက တကယ်ကို မိုက်လိမ့်မယ်။
Instead, like this:
clearly defining and communicating
your value are essential
သင့်ရဲ့ ထူးချွန်မှုအတွက် လစာကောင်းကောင်း
ရဖို့ သင့်တန်ဖိုးကို ရှင်းရှင်းလေး ဖေါ်ပြ
to being paid well for your excellence.
Anyone here want to be paid well?
then this talk is for everyone.
It's got universal applicability.
ဒါက နေရာတိုင်းကို ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်၊
It's true if you'reabusiness owner,
if you're an employee,
if you'reajob seeker.
It's true if you'reaman orawoman.
ယောကျ်ား (သို့) မိန်းမဆိုရင် မှန်တယ်။
Now, I approach this today through
the lens of the woman business owner,
ကျွန်မ ဒါကို ဒီနေ့ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်
ရဲ့ အမြင်ကနေ ချဉ်းကပ်တာက
because in my work I've observed
that women underprice more so than men.
အလုပ်မှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသား
တွေထက် ပိုလျှော့ပေးတာ သတိပြုမိလို့ပါ။
The gender wage gap is
a well-traveled narrative in this country.
ကျားမ လုပ်ခကွာခြားချက်က ဒီနိုင်ငံမှာ
of Labor Statistics,
Bureau of Labor Statistics အရ
a woman employee earns just 83 cents
for every dollaraman earns.
တစ်ဒေါ်လာရတိုင်း ၈၃ ဆင့်ပဲရတယ်။
is that this trend continues
even into the entrepreneurial sphere.
A woman business owner earns just
80 cents for every dollaraman earns.
တစ်ဦး တစ်ဒေါ်လာရတိုင်း ဆင့် ၈၀ ပဲရတယ်။
In my work, I've often heard women express
that they're uncomfortable
communicating their value,
especially early on in business ownership.
"I don't like to toot my own horn."
"I'd rather let the work
I hear very different narratives
in working with male business owners,
အမျိုးသား လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွဲလုပ်ရင်း
အတော်ခြားနားတဲ့ အဖြစ်တွေ ကြားရတယ်
and I think this difference
is costing women 20 cents on the dollar.
တစ်ဒေါ်လာမှာ ဆင့် ၂၀ ပေးဆပ်ပုံရတယ်။
I'd like to tell you the story
ofaconsulting firm
အမြတ်ငွေ သိသာစွာ တိုးအောင်
that helps their clients
dramatically improve their profitability.
That company is my company.
ဒါက ကျွန်မရဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။
After my first year in business,
I saw the profit increases
ကျွန်မရဲ့ စီးပွားရေး ပထမနှစ်အပြီးမှာ
that my clients were realizing
in working with me,
and I realized that I needed
to reevaluate my pricing.
ကိုယ့်စျေးနှုန်းကို ပြန်ညှိဖို့ လိုတာ
I was really underpriced
relative to the value I was delivering.
ကျွန်မက ဖန်တီးနေတဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ စာရင်
It's hard for me to admit to you,
because I'mapricing consultant.
I help companies price for value.
ကုမ္ပဏီတွေကို တန်ဖိုးသတ်မှတ် ပေးတယ်။
But nonetheless, it's what I saw,
ဒါပေမဲ့လည် ဒါကို ကျွန်မသတိထားမိတယ်
and so I sat down to evaluate my pricing,
evaluate my value,
ဒါနဲ့ ကိုယ်စျေးနှုန်းတွေနဲ့ ကိုယ့်
တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ဖို့ ထိုင်လိုက်တယ်၊
by asking key value questions.
ဒါကို အဓိကကျတဲ့ မေးခွန်းတွေမေးရင်း
What are my clients' needs
and how do I meet them?
ဖောက်သည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်က ဘာလဲ။
What is my unique skill set that makes me
better qualified to serve my clients?
ဖောက်သည်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ပိုကောင်း
အဆင့်မီစေတဲ့ ကိုယ့်ထူးခြားတာက ဘာလဲ။
ဘယ်သူမှ မတတ်ပေမဲ့ ငါလုပ်နိုင်တာဘာလဲ
What problems do I solve for clients?
I answered these questions
and defined the value that my clients
get from working with me,
ကျွန်မရဲ့ ဖောက်သည်တွေ ကျွန်မနဲ့
အလုပ်လုပ်လို့တဲ့ တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်တယ်၊
calculated their return on investment,
and what I saw was
that I needed to double my price,
ကျွန်မ စျေးနှုန်းကို နှစ်ဆတိုးဖို့လိုတာပါ။
Now, I confess to you, this terrified me.
ကဲ၊ ရှင်တို့ကို ဝန်ခံပါတယ်၊
အဲဒါက ကျွန်မကို ခြောက်လှန့်ခဲ့တယ်။
I'm supposed to be the expert in this,
but I'm not cured.
ကျွန်မဟာ ဒီမှာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သင့်ပေမဲ့
I knew the value was there.
အဲဒီမှာ တန်ဖိုးရှိတာ သိခဲ့တယ်၊
I was convinced the value was there,
တန်ဖိုးက အဲဒီမှာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။
and I was still scared out of my wits.
ကျွန်မ အသိဉာဏ်ကနေ ကြောက်နေခဲ့တုန်းပဲ။
What if nobody would pay me that?
ဘယ်သူမှ ငါ့ကို မပေးဘူးဆိုရင်ရော။
What if clients said, "That's ridiculous.
"ဒါက ပေါက်ကရတွေ၊ မင်းရူးနေတာလို့
Was I really worth that?
Not my work, mind you, but me.
ငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူ၊ သတိထား၊ ငါပဲလေ။
Was I worth that?
I'm the mother of two beautiful
little girls who depend upon me.
ကျွန်မက ကိုယ့်ကို မှီခိုနေရတဲ့
ချစ်သမီးလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်ပါ။
But I know how to take my own medicine,
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဆေး ဘယ်လိုပြုစုရမှာ သိတယ်
the medicine that I
prescribe to my clients.
ကျွန်မဖောက်သည်တွေကို ညွှန်းပေးတဲ့ ဆေးလေ။
အဲဒီမှာ တန်ဖိုးရှိတာ သိတယ်။
So when prospects came,
ဒါနဲ့ အလားအလာ ရောက်လာခဲ့တယ်။၊
I prepared the proposals
with the new higher pricing
and sent them out
and communicated the value.
How's the story end?
ဇာတ်လမ်း အဆုံးက ဘယ်လိုလဲ။
Clients continued to hire me
ဖောက်သည်တွေ ကျွန်မကို ဆက်ငှားကြတယ်။
and refer me and recommend me,
ဒီမှာ ကျွန်မ ရှိတုန်းပဲ။
And I share this story
because doubts and fears
are natural and normal.
But they don't define our value,
and they shouldn't limit
our earning potential.
ဝင်ငွေ အလားအလာကို မကန့်သတ်သင့်ဘူး။
I'd like to share another story,
aboutawoman who learned
to communicate her value
and found her own voice.
She runsasuccessful
သူမက အောင်မြင်တဲ့ ဝက်ဘ် တိုးတက်ရေး
and employs several people.
When she first started her firm
and for several years thereafter,
ပထမ သူမ လုပ်ငန်းစတုန်းကနဲ့
she would say, "I have
a little web design company."
သူမပြောနေမှာက "ငါ့မှာ ဝက်ဘ်
She'd actually use
those words with clients.
"I havealittle web design company."
"ငါ့မှာ ဝက်ဘ် ကုမ္ပဏီ အသေးလေးရှိတယ်။"
In this and in many other small ways,
she was diminishing her company
in the eyes of prospects and clients,
သူမဟာ အလားအလားတွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့
အမြင်မှာ သူမကုမ္ပဏီနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကို
and diminishing herself.
It was really impacting her ability
to earn what she was worth.
ဒါက သူမနဲ့ထိုက်တန်ရာကိုရဖို့ တကယ်ပဲ
I believe her language and her style
သူမရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ သူမရဲ့ဟန်က
communicated that she didn't believe
ပေးနိုင်တဲ့ တန်ဖိုး များစွာ
she had much value to offer.
In her own words, she was practically
giving her services away.
သူမ စကားလုံးတွေအရ သူမဟာ
ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အလကားနီးပါး ပေးနေတယ်။
And so she began her journey
ဒါနဲ့ ဖောက်သည်တွေဆီ တန်ဖိုးကိုအသိပေးဖို့၊
for communicating value to clients
ဒါနဲ့ သူမရဲ့ ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုကို
and changing her message.
သူမရဲ့ ခရီးကို စခဲ့တယ်
One thing I shared with her
သူမအား ကျွန်မ မျှဝေပေးလိုက်တဲ့
is that it's so important
အချက်က ကိုယ့်အသံကို ရှာနိုင်ဖို့
to find your own voice,
အင်မတန် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာပါ၊
a voice that's authentic and true to you.
သင့်အတွက် စစ်မှန်တဲ့ အသံဖြစ်ရမယ်။
Don't try to channel your sister-in-law
just because she'sagreat salesperson
ကိုယ့်အသံ မဟုတ်ရင် အင်မတန်တော်တဲ့
အရောင်းသမား ကိုယ့်ယောင်းမ (သို့)
or your neighbor who tellsagreat joke
if that's not who you are.
အိမ်နီးချင်းရဲ့ လေသံဖြင့် မကြိုးစားပါနဲ့။
Give up this notion
that it's tooting your own horn.
ဒါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ဖော်လိုတဲ့
Make it about the other party.
Focus on serving and adding value,
and it won't feel like bragging.
ကြွားဝါးမှု မဟုတ်တဲ့ ဝန်ဆောင်ဖို့နဲ့
about the work that you do?
ဘာက သင့်စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေလဲ။
If you connect with that, communicating
your value will come naturally.
ဒါနဲ့ သင်ဆက်စပ်မိရင် သင့်တန်ဖိုးကို
အသိပေးခြင်းဟာ သဘာဝကျကျ ဖြစ်လာမှာပါ။
So she embraced her natural style,
ဒါနဲ့ သူမအတွက် သဘာဝကျတဲ့
found her voice and changed her message.
For one thing, she stopped calling herself
a little web design company.
တစ်ခုကတော့ သူမကိုသူမ အသေးစား ဝက်ဘ်
ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီလို့ခေါ်တာ ရပ်လိုက်တယ်။
She really foundalot of strength
and power in communicating her message.
သူမရဲ့ သတင်းစကားကို ပါးပေးမှုဟာ တကယ့်ကို
အားကောင်း ထိရောက်တာ တကယ် တွေ့သွားတယ်။
She's now charging three times
as much for web design,
အခု သူမဟာ ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းအတွက်
and her business is growing.
She told me aboutarecent meeting
မကြာခင်က ခပ်ပြတ်ပြတ်၊ တစ်ခါတစ်ခါ
withagruff and sometimes
who had calledameeting questioning
progress on search engine optimization.
ရှာဖွရေး အင်ဂျင်မှာ တိုးတက်မှု
မေးခွန်းထုတ်ဖို့ အစည်း အဝေးခေါ်ခဲ့သူပါ။
She said in the old days,
a really intimidating meeting for her,
သူမအတွက် တကယ့် ကြောက်မက်ဖွယ်
but her mindset was different.
She said, she prepared the information,
sat down with the client,
said this isn't about me,
ဒါက ကျွန်မနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊
She took them through the data,
through the numbers,
သူမက ဒါတွေကို ဒေတာတွေ၊ ကိန်းတွေကနေ
laid out the trends and the progress
in her own voice and in her own way,
လားရာတွေနဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ကိုယ်ပိုင်
အသံ၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ခင်းပြပေမဲ့
but very directly said,
"Here's what we've done for you."
"ဒီမှာလေ၊ ရှင်တို့အတွက် လုပ်ထားတာ။"
The client sat up and took notice,
and said, "OK, I got it."
ဖောက်သည်က ထရပ်ပြီး သတိပြုမိပြီး
ပြောတယ်။ "အိုကေ၊ နားလည်ပြီ။"
And she said in describing that meeting,
ဒီအစည်းအဝေးကို သူမ သရုပ်ဖော်ပြောတာက
"I didn't feel scared or panicky
"ကျွန်မဟာ အရင်တုန်းကလို ကြောက်တာ၊
လန့်တာ၊ သိမ်ငယ်တာ လိုဟာမျိုး
which is how I used to feel.
Instead I feel like, 'OK, I got this.
"အိုကေ၊ ငါ့မှာ ဒါရှိတယ်"လို ဆိုတာအစား
I know what I'm doing. I'm confident.'"
ငါလုပ်နေတာ ငါသိတယ်၊ ငါ့မှာ
Being properly valued is so important.
You can hear in this story
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ သင် ကြားနိုင်တာက
that the implications
range far beyond just finances
into the realm of self-respect
မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှု၊ မိမိကိုယ်ကို
ယုံကြည်မှု နယ်ပယ်ထဲဆီ လွမ်းခြုံတာပါ။
Today I've told two stories,
one about defining our value
ဒီနေ့ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု ကျွန်မပြောခဲ့တယ်။
and the other about
communicating our value,
and these are the two elements
to realizing our full earning potential.
ကိုယ့်ဝင်ငွေဆိုင်ရာ အလားအလာကို အပြည့်အဝ
ရုပ်လုံးဖေါ်ရေး အစိတ်အပိုင်း နှစ်ရပ်ပါ။
That's the equation.
And if you're sitting
in the audience today
သင်ဒီနေ့ ပရိတ်သတ်ကြားမှာ ထိုင်နေတယ်၊
and you're not being paid
what you're worth,
သင်ဟာ သင်နဲ့တန်သလောက် မရဘူး ဆိုရင်၊
into this equation.
သင်တို့ကို ဒီညီမျှခြင်းထဲမှာ ကြိုချင်တယ်။
Just imagine what life could be like,
ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဘဝကို ဒီလိုမျိုး
how much more we could do,
ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည့်ဝ စွမ်းအားကို ရပြီး
how much more we could give back,
how much more we could
ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်များ ပိုလုပ်နိုင်မလဲ၊
how validated and respected we would feel
ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်များ ပြန်ပေးနိုင်မလဲ။
if we could earn our full potential,
ပိုအစီစဉ်ချနိုင်၊ ဘယ်လို ခိုင်လုံ
realize our full value.
what they think you're worth,
သူတို့ထင်တဲ့ သင့်အတွက် ထိုက်တန်မှုကိုသာ
and you control their thinking.
သူတို့ တွေးပုံ သင်ထိန်းချုပ်ပါ။
Casey Brown: မိမိတန်ဖိုးကို သိထားပြီး အဲဒါ့အတွက်ထိုက်တန်စွာ တောင်းဆိုပါ။ | TED Talk | TED.com